10 Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany
99% ny mpikatsaka ny fiainana dia mifidy ny handeha ho any Afrika amin'ny dia safari epic. Na izany aza, nifantina ny 10 Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany, avy any Eropa ka hatrany Sina, ny tsy dia lavitra, fa ny toerana tsy hay hadinoina sy manokana.
1. Jiuzhaigou any Sina
Trano mankany 40% ny karazana biby dia, sy ny biby any Chine, ny lohasahan'i Jiuzhaigou dia 4800 metatra ny hahavony. Lohasahan'i Jiuzhaigou dia iray amin'ireo 10 Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany miaraka amin'ny mahatalanjona tontolo ary tontolo iainana.
Ao amin'ny Lohasahan'i Jiuzhaigou, hanana vidy tsy voavidy sarobidy ianao hahita ny Giant Panda, panda mena, Sichuan takin, sy ny rajako orona orona. Ity dia vitsivitsy monja amin'ireo biby tsy fahita firy monina ao amin'ny lohasaha Jiuzhaigou nandritra ny taonjato maro. Ireo karazana tandindonin-doza ireo dia miaina ao amin'ny faritry ny riandrano, farihy, tendrombohitra vatosokay, sy ny formations Krast, toerana misy hatsarana miavaka izay hanandratra ny fanahinao sy ny fialantsasatry ny bibidia amin'ny sehatra vaovao.
Aiza ny lohasaha Jiuzhaigou any Sina?
Ny lohasaha Jiuzhaigou tsara tarehy dia ao amin'ny faritanin'i Sichuan any Shina ary azo idirana avy any Beijing na Chengdu.
2. Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany: Shennongjia any Sina
Mba hahitana ilay rajako manana orona Sichuan Snub dia tsy mila mandeha lavitra ianao satria miaina any an'ala any afovoan'i Sina ity gidro tsy fahita firy ity.. marina izany, ny Shennongjia Fikajiana voajanahary any amin'ny faritanin'i Hubei no misy ilay gidro maditra, bera fotsy, nanakorontana, leoparda iraisana, ary bera mainty aziatika.
Ankoatry ny, ny Zaridainan'i Nary Shennongjia dia tsara tarehy miavaka amin'ny tendro avo sy renirano ambany. Manomboka amin'ny ririnina ka hatramin'ny fahavaratra, ny fijerin'ny natiora dia miova mandritra ny taona, mampanantena traikefa hafa isaky ny manapa-kevitra ny hitsidika ianao. Na izany aza, ny fotoana mety hitsidihana azy dia ny Mey ka hatramin'ny septambra, ary tokony hamandrika ny tapakilao ianao.
Aiza ny tahirin-javaboary Shennongjia any Shina?
Ny tahiry Shennongjia dia eo afovoan'i Sina, ary tsara kokoa ny manao ny tobim-bibinao ao an-tanànan'i Muyu.
3. Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany: Mount Huangshan any Sina
Aingam-panahy ho an'ny poeta sy mpanoratra, tsy mahagaga raha mahavariana fiainana eto an-tany ny Mount Huangshan. Huangshan dia hita ao amin'ny faritry ny toetrandro subtropika any amin'ny faritanin'i Anhui. Ary noho izany, ankoatry ny voromahery hita, ary saka saka dia, ny zavamaniry sy ny voninkazo eto no tena mahafinaritra sy manokana eto Sina rehetra.
Ireo bibidia tsy fahita firy’ Ny honina dia hazo kesika taloha sy vatolampy vato, izay ahafahanao miakatra ambonin'ny rahona. Ny mila ataonao dia ny misafidy iray amin'ireo 70 tampon'isa eo amin'ilay faritra mahavariana fomba fijery mahafinaritra ny tahiry voajanahary. Andalana ambany, be dia be ny mahita, tokony hamandrika ianao 2-3 andro tsy hay hadinoina fialantsasatry ny biby any Huangshan.
Aiza ny Reserve Reserve voajanahary Mount Huangshan any Shina?
Mount Huangshan dia 3 ora miala an'i Shanghai amin'ny alàlan'i fiaran-dalamby haingam-pandeha, any amin'ny faritanin'i Anhui.
4. Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany: Liguria ho an'ny feso feso any Italia
Liguria ary Cinque Terre dia malaza amin'ny morontsiraka maro loko sy kanto sy tanàna mahafinaritra azy ireo. Raha tsy fantatrao izany, Liguria koa dia toeran-kaleha mahafinaritra hijerena trozona sy feso. Manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra, afaka mandeha amin'ny iray amin'ireo fitsangantsanganana an-tsambo marobe any Liguria ianao amin'ny fikatsahana aorian'ny mahavariana fiainana an-dranomasina any Italia.
Ny morontsiraka sy hantsana mahafinaritra eo amin'ny Cinque Terre dia feno coves miafina, sy zava-mahatalanjona eny ambanin'ny ranomasina. Noho izany, avy amin'ny sambo na mitsoraka ao, ary nilomano, ho gaga ianao amin'ny fiainana an-dranomasina any Liguria. Ny fialantsasatry ny biby any Liguria dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo fomba tsara indrindra handaniana ny fahavaratra.
5. Fialantsasatra momba ny fiainana an-tany any Pyrenees
Vorona mpihaza toy ny voromahery volamena misavoana ambonin'ny lohanao, ary ny chamois sy ibex amin'ny làlambe, ny Pyrenees dia toeran-javaboary mahafinaritra iray eto amin'izao tontolo izao. Tendrombohitra mahavariana, satroka feno lanezy, sy ny natiora mamelana, ny valan-javaboary frantsay Pyrenees dia iray amin'ireo toerana fialantsasatra farany bibidia any Eropa.
Noho izany, ankoatry ny fitsangatsangana an-tongotra any Pyrenees mahatalanjona, afaka mandeha mitsangatsangana ianao, na fitsidihana sary vorona mpihaza. Na dia toerana fialan-tsasatra malaza any Eropa aza ny Pyrenees frantsay, midadasika ny faritra ka tsy tokony hatahoranao ireo mpitsangatsangana hafa atahorana ny bibidia sy biby tsara tarehy.
Inona no fomba tsara indrindra ahazoana mankany amin'ireo Pyrenees frantsay?
Maka ny Eurostar avy any Londres, ary avy eo ny fiaran-dalamby TGV avy any Paris na Lille mankany Toulouse no làlana tsara indrindra mankany Pyrenees.
6. Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany: Ny Camargue any Frantsa
Ny tahiry nasionaly Camargue any Frantsa dia noforonina tany 1972 sady toy ny valan-javaboary arovana. Na izany aza, ny lagoon sy ny marshland no tany arovana indrindra any Eropa, ary eto no trano 400 karazam-borona ary flamingo mavokely lehibe kokoa.
Eto koa dia hanana fotoana handehanana manamorona ny renirano lehibe indrindra any Eropa ianao, Delta, ary tadiavo ireo soavaly dia. Ary, Some ny vorona manokana azonao jerena eto dia ny volomparasy volomparasy, Ternakely, ary ilay Gull mainty loha.
Ny fotoana mety indrindra handehanana dia amin'ny fahavaratra rehefa tonga ny vorona ary soavaly volondavenona.
Inona no fomba tsara indrindra handehanana any Camargue?
Afaka mandeha lamasinina avy any Paris mankany Nimes ianao, Marseille, na Arles, ary avy eo ny bus.
7. Fisser Hofe Any Aotrisy
517 kilometatra ny fiainana dia, ny Fisser Hofe any andrefan'i Tyrol dia iray amin'ireo tsiambaratelo voatahiry tsara indrindra any Austria. Tsy dia misy mahalala an'io toerana io, fa eto no ahitanao toerana mahafinaritra ho an'ny fakana sary dia.
Amin'ny lohataona dia mamelana tanteraka ny Fisser Hofe, ary mety ho tsara vintana ianao haka ny lolo Apollo tsara tarehy. Angamba, hahita voromahery Mainty eo amin'ny faravodilanitra ianao, na ny chamois hafa, pygarga, ary lambo dia. Na izany aza, ny fomba tsara indrindra hahitana ireo biby tsy fahita firy ireo dia ny fitsangatsangana an-tendrombohitra, ny 3000 metatra, amin'ny iray amin'ireo làlambe maro any Fisser Hofe.
Inona no fomba tsara indrindra hahatongavana any amin'ny Fisser Hofe any Aotrisy?
Afaka mandeha amin'ny lamasinina OBB ianao avy ao tanàn-dehibe any Aotrisy ka hatrany amin'ny tanànan'i Fiss any Tyrol. Salzburg, Vienna, na ny làlan-dalamby Innsbruck mankany Fiss avy amin'ny OBB dia làlana fitsangatsanganana an-dalamby malaza.
8. Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany: Bibidia ao amin'ny Ony Danube
Avy amin'ny Ala Mainty any Alemana, manerana an'i Eropa ka hatrany Romania, ny renirano Danube dia iray amin'ireo toerana itadiavana bibidia tsara indrindra eto an-tany. Ary noho izany, ho loharano lehibe amin'ny rano sy sakafo, tsy mahagaga raha ny renirano Danube no iray amin'ny toerana tsara indrindra hahitana ireo karazana tandindomin-doza.
Ohatra, ilay mpanjakavavy eoropeanina kely dia iray amin'ireo mahatalanjona 400 karazam-borona monina ao amin'ny renirano Danube. Ankoatry ny, ahon Zemplen Hills, ary ny valan-javaboary Aggtelek, afaka mijery ianao 73 karazana biby mampinono, toy ny amboahaolo mena sy volon-trondro mena.
9. Merfelder Bruch Nature Reserve any Alemana
Trano misy ny soavaly soavaly farany any Eropa ary iray amin'ireo fahitana mahafinaritra indrindra dia ny fahitana soavaly mitaingina. Ary noho izany, Hohe Mark park dia toerana tianao indrindra hijerena ny bibidia.
Ankoatry ny, eo afovoan'ny ala sy ny tany maintso, you might be lucky to spot the beautiful Dulmen Pony. Ny Dulmen Pony dia karazana soavaly, mipetraka ao Merfelder Bruch, ao an-tanàna misy soavaly dia, na Rhine-Westphalia. Merfelder Bruch dia fitoerana masina ho an'ny karazana soavaly roa izay miaina malalaka amin'ny fonenany voajanahary.
Inona no fomba tsara indrindra handehanana mankany Merfelder Bruch?
Mandray ny lamasinina avy any Britain na aiza na aiza any Alemana mankany Kolon sy North Rhine-Westphalia. Avy eo azonao atao ny miditra amin'ny fitsidihana na manofa fiara mankany Merfelder Bruch.
10. Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany: Voninkazo Wengen an'ny Alpes Soisa
Ireo toerana mahafinaritra rehetra ato aminay 10 Toeram-piaramanidina tsara indrindra eto an-tany no fonenan'ny bibidia tsy dia fahita indrindra any Eropa. Na izany aza, Wengen dia fonenan'ny biby dia ary mahavariana ny lanitra. Any any amin'ny Alpes Soisa, mahatalanjona tanteraka ny fomba fijery eto, misy tendrombohitra feno lanezy, lohasaha maitso maitso, riandrano, ary ny voninkazo mahatalanjona indrindra.
In July the wild butterflies adorn the rare Lady Slipper Orchid, teratany trompetra, saxifrages, ary voninkazo mahatalanjona hafa manamorona ny glacier Eiger. Ireo voninkazo manaitra ireo dia maniry eo amin'ny havoana an-tampon'ny Alpes Swiss, miakatra ny lohasaha Lauterbrunnen mahafinaritra. Noho izany, miomàna hitsangatsangana mankany amin'ny rahona sy lanitra madio manga hahita ireo fahagagana voajanahary ireo.
Inona no fomba tsara indrindra ahazoana mankany Wengen Bernese Oberland?
Take a train to Lauterbrunnen valley, ary avy eo nisy fiaran-dalamby nankany amin'ny tanàna Wengen.
eto amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao handamina fitsangatsanganana iray tsy hay hadinoina, sa ny rehetra 10 Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany: manerana an'i Eropa na Sina amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “10 Toeram-piompiana tsara indrindra eto an-tany” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wildlife-destinations-world%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
amazingwildlifeholidaysworldwide animal Bestnaturereserveineurope BestTravelDestinationsChina bestWildlifedestinationsinchina BestWildlifevacationsworldwide WildelifeDestinations bibidia